इङ्गल्याण्ड को प्रधानमन्त्री (बेलायत) को हुनुहुन्छ? इङ्गल्याण्ड को प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु को सूची (बेलायत)
जानिन्छ, सरकार को रूप मा संयुक्त राज्य संवैधानिक राजतन्त्र छ। तर, यो देशमा जस्तै संविधान छैन, र प्रशासन को धेरै subtleties शताब्दीयौंदेखि पुरानो परम्परा द्वारा निर्धारित छन्। आज ब्रिटिश सम्राट को टाउको छ हुनत, देश वास्तवमा प्रधानमन्त्री निर्देशन। निस्सन्देह, रानी लगभग निरपेक्ष शक्ति छ, तर अन्य मानिसहरूले देश चलाउन। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जहाँ बसोबास बारे लागि जिम्मेवार छ के र कुन शक्तिहरु गर्छ, साथै केही सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक तथ्याङ्कले, को incumbent को - पछि यो लेख।
परम्परा गरेर, प्रधानमन्त्री सम्राट रोजेका छ। सामान्यतया, एक व्यक्ति लागि उच्चतम समर्थन आनंद कमन्स को घर। प्रायजसो, यो बहुमत पक्ष को नेता बन्दछ। को प्रधानमन्त्री को कार्यालय को अवधि राम्ररी उहाँले निर्वाचित थियो जो को समर्थन संग, कमन्स को घर को काम को अवधि संग जोडिएको छ। सम्राट र adviser को मुख्य प्रतिनिधि - द प्रधानमन्त्री, बिजुली को धेरै छ सरकार को काम निरीक्षण, छोटो, यो छ।
चाखलाग्दो कुरा, ब्रिटेन को राजधानी मा 10 डाउनिंग सडक मा घर - इङ्गल्याण्ड को पहिलो प्रधानमन्त्री - लन्डन, मूल राजा रबर्ट Walpole व्यक्तिगत उपहार थियो। तथापि, उहाँले यस्तो वर्तमान इन्कार गरे। हामी कोठा देशको सेवक को पहिलो सीट हुनेछ, र पछि त्यो ठेगाना राजनीतिक नेताहरूको भन्दा, को incumbent मा बस्ने भएको छ भन्ने तथ्यलाई मा सहमत भए।
सूची जो आफ्नो परिचय, 1721 मा 53 मान्छे लिए भएदेखि यो स्थिति विभिन्न दल र विभिन्न नीतिहरू थिए किनभने, पर्याप्त ठूलो छ ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सेवक। तिनीहरूलाई प्रत्येक प्रभाव बदलिने डिग्री थियो र आफ्नो मान्छे मा सम्झना गर्न। इतिहास मा सबैभन्दा ठूलो चिन्ह बायाँ गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्याङ्कले बारेमा संक्षिप्त जानकारी तल हामी प्रस्तुत।
रबर्ट Walpole (1676-1745)
रबर्ट Walpole उहाँले 25 वर्षको हुँदा कमन्स को घर, को संरचना मा आफ्नो राजनीतिक क्यारियर सुरु भयो। जब राजा जर्ज तृतीय, 1721 मा, त्यो मुख्य मन्त्री र सार्वजनिक पर्स को समवर्ती प्रबन्धक नियुक्त गरियो। त्यतिबेलादेखि बेलायत कैबिनेट को टाउको मा थियो व्यक्तिले जिम्मेवारी यस स्थिति नियुक्त गर्न परम्परा भएको छ।
रबर्ट Walpole, इङ्गल्याण्ड को पहिलो प्रधानमन्त्री, आफ्नो उत्तराधिकारियों भन्दा अब पोस्ट आयोजित - उहाँले 21 वर्षसम्म सरकार नेतृत्व।
Uilyam पिट जवान (1759-1806)
उहाँले 1783 देखि 1801 र 1804 देखि 1806 साल, दुई पटक पहिलो प्रधानमन्त्री को पोस्ट आयोजित। Uilyam पिट जवान - उहाँले पहिलो पटक पोस्ट नियुक्त हुँदा उहाँले मात्र 24 वर्ष पुरानो थियो इङ्गल्याण्ड को कान्छो प्रधानमन्त्री। तर, अत्यधिक घबराहट, उहाँले कहिल्यै निकै, राज्य को कर्ण मा रहेको अनुभव थियो जो कामदार अपेक्षाकृत युवा मृत्यु को कारण आफ्नो स्वास्थ्य खराब।
त्यतिबेला देश अर्थव्यवस्था मा नकारात्मक प्रभाव थियो जो, उत्तर अमेरिका यसको colonies नियन्त्रण गुमाएको छ किनभने विलियम पिट संयुक्त राज्य लागि सरकारको साना साल, कठिन थिए। साथै, यो फ्रान्सेली क्रान्तिको लागि प्रतिक्रिया र नेपोलियन विरुद्ध युद्ध को लागि एक रणनीति विकास गर्न आवश्यक थियो। पिट मात्र नेपोलियन विरुद्ध तीन गठबन्धनहरू को initiator थियो, तर पनि इङ्गल्याण्ड को एक भाग रूपमा आयरल्याण्ड कायम राख्ने योगदान।
बेन्जामिन Disraeli (1804-1881)
उहाँले 1868 र 1874-1880, क्रमशः स्थिति आयोजित। यो राजनीतिज्ञ, आफ्नो युवावस्थामा, सार्वजनिक को ध्यान धेरै आकर्षित धेरै उपन्यास प्रकाशित एक राजनीतिज्ञ, रूपमा आफूलाई साबित जो, चासो राज्य-स्तर कार्यहरू र साधारण मान्छे को समस्या संग। Disraeli को शहर मा काम गर्ने मानिस, चुनावमा भाग लिन सक्षम थिए जो अनुसार, एक व्यवस्था गरे। उहाँले पनि शहरी बस्तियों र कामदारहरूलाई निवास अवस्थाको सेनेटरी अवस्थाको सुधार मा लगे।
मा विदेशी नीति, बिन्यामीन Disraeli पनि धेरै सफलता हासिल: आफ्नो उपस्थिति मा Koroleva Viktoriya भारत महारानी को शीर्षक प्राप्त, र संयुक्त राज्य को स्वेज नहर नियन्त्रण पाउनु भएको छ। इङ्गल्याण्ड को पूर्व प्रधानमन्त्री, राम्रो वक्ता, धेरै witty मानिस थिए, र हास्य को आफ्नो भावना यो पनि जीवनको अन्तिम क्षणमा उसलाई छोड्न गर्नुभएको भनिएको थियो।
विन्सटन चर्चिल (1874-1965)
विन्सटन चर्चिल, जसको पुर्खा दिग्गज Dzhon Cherchill, Marlborough पहिलो ड्यूक छ, दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा संयुक्त राज्य को ज्ञानी व्यवस्थापनका लागि संसारभरि ज्ञात थियो। तथापि, आफ्नो जीवनको कथा जीवन्त एपिसोडको भरिएको छ। एक बच्चाको रूपमा, भविष्यमा राजनीतिज्ञ थप एक पूर्ण शिक्षा प्राप्त बाट यो रोकियो जो एक बाटो बिराएको बच्चा थियो। तसर्थ, उहाँले सैन्य मामिलामा संलग्न निर्णय गरे।
1899 मा, इङ्गल्याण्ड को भविष्य प्रधानमन्त्री, resigned र राजनीति मा भयो, र एक वर्ष पछि गर्न संसद निर्वाचित भएको थियो। सुरुमा चर्चिल सधैंभरि रूढिवादी दृश्य आयोजित, तर 1904 मा उहाँले liberals को पार्टी सामेल, तर - 1924 मा उहाँले conservatives को बाँध्न फर्के। 1939 मा, त्यसपछि ब्रिटेन चर्चिल को पहिलो मन्त्री नेभिल चेम्बरलेन को Admiralty को टाउको नियुक्त, तर अर्को वर्ष, Korol Georg VI उसलाई सरकारको नेतृत्व लिन निमन्त्रणा।
जबकि धेरै अन्य राजनीतिज्ञ को पहिला आक्रमण गर्ने देश वा व्यक्ति संग सम्झौताहरू को संभावना स्वीकारे युद्ध समयमा, विन्सटन चर्चिल नाजी जर्मनी विरुद्ध कठिन रुख द्वारा, प्रतिष्ठित थियो। उहाँले द्वितीय विश्व युद्ध मा ग्रेट ब्रिटेन को विजय गर्न एक महत्वपूर्ण योगदान क्रमशः, 1951-1955 मा दोस्रो अवधि गर्न निर्वाचित थियो बनाएको छ र यसको अन्त्य मा प्रधानमन्त्री को पोस्ट बायाँ र त्यसपछि।
मार्गरेट Tetcher (1925-2013)
मार्गरेट थ्याचर, कलेज राजनीतिमा रुचि भए देखि पनि, दुई किराना पसल, प्रशिक्षण द्वारा रसायनज्ञ मालिक को परिवार मा जन्म भएको थियो जो। को विशेषता दुई वर्ष पछि, 1948 मा, त्यो माथि राजनीतिक गतिविधि गरे, र त्यो ग्रेट ब्रिटेन को सरकार टाउको गर्न सम्मान थियो पहिले, त्यो भ्रमण गर्न सक्षम थियो, र शिक्षा र विज्ञान को मन्त्री, र दक्षिणपन्थी पार्टी को नेता।
1979 देखि, इङ्गल्याण्ड को नयाँ प्रधानमन्त्री - पछि सोभियत संघ को आफ्नो तेज आलोचना लागि "फलाम लेडी" भनिन्छ जो बलियो वर्ण, एक महिला। तर, यी गुणहरू उनको 11 वर्ष को लागि सरकार को पहिलो मन्त्री रूपमा रहन मदत गरे। कहिलेकाहीं तैपनि राम्रो परिणाम दिनुभएको छैन पनि लोकप्रिय सुधार खर्च गर्न भएको थियो।
मार्गरेट Tetcher को नेतृत्व अन्तर्गत दक्षिणपन्थी पार्टी एक भन्दा बढी विजय यसरी आफ्नो कार्यकाल लिभरपूल को अर्ल, 1812 देखि 1827 को ब्रिटिश सरकार नेतृत्व गर्ने अवधिको लागि रेकर्ड तोडने, तीन पटक जित्यो, र त्यो "फलाम लेडी" प्रधानमन्त्री को पोस्ट गर्न निर्वाचित भएको थियो।
दाऊदले गगन (ख। 1966)
आज, ग्रेट ब्रिटेन दाऊदले गगन छ, 2010 देखि यो स्थिति आयोजित छ जो पहिलो प्रधानमन्त्री। 2005 देखि उहाँले - रूढिवादी पार्टी को टाउको। उहाँले अर्थशास्त्र, राजनीति र दर्शन अध्ययन जहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, देखि स्नातक पछि, गगन रातो उपाधि पाए। आफ्नो राजनीतिक क्यारियर अनुसन्धान विभाग मा काम संग 1988 मा शुरू भयो ग्रेट ब्रिटेन को दक्षिणपन्थी पार्टी को। गगन केही समय वित्त को मन्त्री गर्न adviser, को आंतरिक मंत्रालय मा काम भएको छ, र पनि ठूलो मिडिया कम्पनीहरु को गवर्नर्स को बोर्ड मा सेवा थियो। 1997 मा उनले चुनावमा भाग लिए, तर 2001 मा मात्र निर्वाचित भएको थियो।
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री दाऊदले गगन युरोपेली संघ संग देशको एकीकरण विस्तार गर्न पर्छ भनेर स्थिति पालना र 2008 मा Georgia मा युद्ध समयमा उहाँले रूस विरुद्ध भिसा प्रतिबन्ध परिचय र अस्थायी रूपमा यसलाई बाट निकाल्न प्रस्तावित आठ को समूह।
धेरै जो परम्परा को रूप मा मात्र अवस्थित र अक्सर ससर्त छन् ब्रिटिश कानून, को विशिष्टता बावजुद निर्वाचन र सरकारको टाउको खारेज र देशमा प्रशासन प्रणाली अन्य nuances को सिद्धान्त एकदम प्रभावकारी छ, र यो पनि लोकतान्त्रिक सकिन्छ। र यो संरचना मा इङ्गल्याण्ड को प्रधानमन्त्री (बेलायत) सम्राट पछि दोस्रो व्यक्ति हो।
Anton Bakov: जीवनी, फोटो, परिवार, पत्नी
सैन्य र राजनीतिक पक्षहरू को गठबन्धनको के हो
"Depantol" मोमबत्ती। तयारी समीक्षा
एक सिंहावलोकन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा: के राम्रो टिभी जडान
सामाजिक चासो - यो के हो? सामाजिक अन्तरक्रिया को प्रकारका
बाहिरी Flowerpots लागि सबै भन्दा राम्रो फूल
Federico Fellini: Filmography, जीवनी
Krupa bulgur: लाभ र हानि